उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा : बन्दसत्रमा कसले के भने ? - Birgunj Sanjalउद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा : बन्दसत्रमा कसले के भने ? - Birgunj Sanjalउद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा : बन्दसत्रमा कसले के भने ? - Birgunj Sanjal
उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा : बन्दसत्रमा कसले के भने ?
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १५:५०
वीरगन्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उमेदवारहरुले आफूलाई निर्वाचित गराउन आग्रह गरेका छन् । साधारणसभाको बन्दसत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्षका उमेदवारहरुले आ-आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै मतदान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
बन्दसत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उमेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो टिम सन्तुलित रहेको बताए । भौगोलिक, व्यावसायिक हरेक हिसाबले आफ्नो टिम सन्तुलित एवं बलियो रहेको बताए । उनले उमेदवारको आफ्नै एजेन्डा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उमेदवार किशोर प्रधानलाई लक्षित गर्दै उनले अब आउने अध्यक्षको एजेन्डा नै आफ्नो एजेन्डा भन्नु व्यावसायिक नभएको बताए ।
“वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अबको नेतृत्वपछि नेतृत्वमा जाने हो । त्यसैले आफू नेतृत्वमा जाँदा के काम गर्छु भन्ने एजेन्डा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उमेदवारसँग हुनुपर्छ,” उनले भने । उनले सिनियर हुँदैमा नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने पनि नरहेको बताए । भवानी राणा, शेखर गोल्छाको उदाहरण दिँदै उनले सिनियर हुँदैमा निर्वाचित गराउनुपर्ने र नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने नहुने बताए ।
अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्षका उमेदवार किशोर प्रधानले महासंघमा २८ वर्षदेखिको अनुभव रहेको भन्दै आफूलाई नेतृत्वमा लैजान आग्रह गरे । “महासंघमा नि:स्वार्थ रुपमा काम गर्न खोजेको छु । मेरो लगनशीलता र कामको अनुभवलाई हेरेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु,” उनले भने ।
महासंघलाई चन्द्र ढकालको पनि आवश्यकता रहेको भन्दै उनले अहिलेलाई आफूलाई छाडेर सहयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे । “मेरो भाइ चन्द्र ढकाल राम्रो मान्छे हो । उहाँको आवश्यकता महासंघलाई छ । मेरो २८ वर्षको अनुभव र योगदानलाई हेर्दै दाइलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्छु,” उनले भने ।
जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षहरु गुणनिधि तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फका उपाध्यक्षहरु अन्जन श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठ, एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्षका उमेदवारहरु रामचन्द्र संघाई र सौरभ ज्योतिले आफ्नो कार्यकालमा गरिने कामका योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।
जिल्लातर्फका उपाध्यक्षका उमेदवार तिवारीले आफूहरुले गरेको प्रतिबद्धता निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म पनि आभाष हुने किसिमले काम नगरे पदमा नरहने बताए । उनले जिल्ला नगरको उपाध्यक्षमा जिल्लाबाटै निर्वाचित गरिनुपर्ने पनि बताए ।
प्रधान र ढकालको उपाध्यक्षसहित कार्यसमिति सदस्यहरु पनि प्यानलनै छ । प्रधानको प्यानलबाट जिल्ला नगरको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत उपाध्यक्षमा अन्जन श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति छन् ।
यसैगरी ढकालको प्यानलबाट जिल्ला नगरको उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितको नयाँ कार्यसमिति सदस्यका लागि भोलि शनिबार बिहान ८ बजेदेखि मतदान हुँदै छ । वार्षिक साधारणसभाको हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।
भारतको ७२ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जमा विशेष समारोह सम्पन्न